အလှူငွေ ရရှိရေး | Hninzigon
Home » အလှူငွေ ရရှိရေး
(က) စေတနာရှင်များ၏ အလှူငွေဖြင့် ရိပ်သာလုပ်ငန်း အရပ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။
(ခ) နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဆန်ရိက္ခာအတွက် နှစ်စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပါသည်။
(ဂ) ဘဏ်တွင်အပ်နှံထားသော ငွေစုစာအုပ်၊ ငွေစုလက်မှတ်များမှ ဘဏ်တိုးရရှိပါသည်။
(ဃ) အကျိုးဆောင်များက ရုံး၊ ရပ်ကွက်များမှ အလှူခံပေးသော အလှူငွေများရရှိပါသည်။
(င) နိုဝင်ဘာ လ၏ပထမ စနေနေ့ ရိပ်သာဘိုးဘွားနေ့အလံကလေးများဖြန့်ဝေ၍ အလှူခံခြင်းဖြင့်လည်း ရရှိပါသည်။
(စ) အလှူမင်္ဂလာခန်းမလုပ်ငန်းများမှ ရရှိငွေများ၊
(ဆ) ရိပ်သာပိုင် အိမ်၊ တိုက်ခန်းများမှ လစဉ်ရရှိငွေများ၊
(ဇ) ပြက္ခဒိန်၊ စာအုပ်ရောင်းရငွေများ။
(က) နည်းများမဆို လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
(ခ) ငွေကျပ် (၁၀၀၀၀ိ-) (တစ်သောင်း) နှင့်အထက် ရာသက်ပန် ငွေပဒေသာပင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
(၁) အစာအဟာရ ပဒေသာပင်၊
(၂) ဆေး ပဒေသာပင်၊
(၃) အထွေထွေ ပဒေသာပင်၊
(၄) အဆောက်အဦးအတွက် ပဒေသာပင် (ဆောက်လုပ်ဆဲရှိသည့်အခါ )။
(ဂ) ဘိုးဘွားများအား တစ်နေ့စာ (လေးနပ်) ကျွေးမွေးခြင်းကို အလှူရငွေများဖြင့် စုပေါင်းကျွေးမွေးပါသည်။
ထိုစုပေါင်း​ ကျွေးမွေးခြင်းတွင် တစ်နေ့စာပါဝင်လှူဒါန်းလိုပါကကျပ်(၃၀၀၀၀ိ-) (သုံးသောင်း) သတ်မှတ်ပါသည်။
ထမင်းတစ်နပ်​ကျပ် (၁၀၀၀၀ိ-) ၊ အရုဏ်စာနှင့်မွန်းလွဲပိုင်း အဆာပြေမုန့်အတွက် တစ်နပ်ကျပ် (၅၀၀၀ိ-) သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(ဃ) စုပေါင်းကျွေးမွေးခြင်းအပြင်ထပ်ဆောင်း၍ တစ်ဦးတည်းကအထူးအဟာရအဖြစ် ကျွေးမွေးလိုပါက ကျပ် (၃၀၀၀၀၀ိ-) (ကျပ်သုံးသိန်းတိတိ) တစ်နေ့စာအတွက်လှူရပါမည်။
(၁) အလှူတော်မင်္ဂလာခန်းမ -- ဧည့် (၁၀၀)
(၂) သီရိရတနာခန်းမ -- ဧည့် (၃၀၀)
(၃) စိန်ရတုခန်းမ (လေးထပ်) -- ဧည့် (၃၀၀) အထက်။
(ခ) ခန်းမအသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းရပါမည်။
(ဂ) ခန်းမအလိုက်သတ်မှတ်ထားသည့် အလှူငွေကြိုတင်လှူဒါန်းရပါမည်။
(ဃ) ကျွေးမွေးလိုသည့် အစားအစာကို ကြိုတင်ညှိနှိုင်းရပါမည်။ ပြင်ပမှအစားအစာများကျွေးမွေးခြင်းလက်မခံပါ။
(င) သံဃာတော်များ ဆွမ်းကျွေးလိုပါက သီးသန့်စီစဉ်ပေးပါသည်။
(စ) အခြားပစ္စည်းများအသုံးပြုခနှင့် ၀န်ဆောင်ခကိုသီးသန့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
(ဆ) တီးဝိုင်းများဖြင့်သီဆိုဖျော်ဖြေခြင်းကို အသံကျယ်လောင်ပါကခွင့်မပြုပါ။ ခန်းမအတွင်းကြားရုံမျှသာ (Soft Music)
စာအုပ်၊ စာဆောင်၊ ပြက္ခဒိန်များထုတ်ပေးခြင်း
(က) စာအုပ်၊ နှစ်ပတ်လည်မဂ္ဂဇင်း၊ စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ်စာစောင်နှင့်အခြားအထိမ်းအမှတ် စာစောင်များထုတ်ဝေသည်။
(ခ) သတင်းအဖြစ် ရိပ်သာလှုပ်ရှားမှုများကို (၆) လတစ်ကြိမ်ခန့် လက်ကမ်းစာစောင်များပြုလုပ်ဖြန့်ဝေသည်။
(ဂ) နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေသည့် ပြက္ခဒိန်ကို ထုတ်ဝေလှူဒါန်းပြီး အထူးထုတ် ပြက္ခဒိန်ကို ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်းဖြင့် အလှူငွေ
(က) အဖွဲ့၏ စည်းမျဉ်းတွင် အမှုဆောင်အဖွဲ့အနေဖြင့် ရိပ်သာကြီးဝန်ထမ်းများဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲ၍ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန်
နှင့် အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးက ကြီးကြပ်ရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
(ခ) ဖွဲ့စည်းပုံအရ ၀န်ထမ်း (၁၃၂) ဦးရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းဌာန (၁၀) ဌာန ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
(ဂ) ၀န်ထမ်းများကို လစား၊ နေ့စားနှုန်း၊ ပြင်ပနေ၀န်ထမ်းများ ခရီးစရိတ်၊ ပညာကြေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကြေးပေးပါသည်။
(ဃ) နေ့လယ်စာကျွေးသည်။ တစ်နှစ်လျှင် ၀တ်စုံအနည်းဆုံး (၂) စုံ နှစ်စဉ်ပေးသည်။ ဆေးကုသခွင့်ပေးသည်။ အနီးကပ်ပြု
စုရသည့် ၀န်ထမ်းများကိုရိပ်သာကြီးဝင်းအတွင်းနေအိမ်ခန်းများ၊ လူပျိုဆောင်၊ အပျိုဆောင်များတွင်နေရာချထားပေး
သည်။ ၀န်ထမ်းသက်သာချောင်ချိရေးလုပ်ငန်းက နှစ်စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပြင်ပနေ ၀န်ထမ်းများအား ခရီး
စရိတ်ထောက်ပံ့သည်။ နယ်မြို့များသို့ဘုရားဖူးအပန်းဖြေခရီးကို အခါအားလျှော်စွာ ပို့ပေးသည်။
(င) ၀န်ထမ်းများကို လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သင်တန်း၊ မင်္ဂလာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း၊ စာရင်းကိုင်
သင်တန်းစသည့် သင်တန်းများ မပြတ်ပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Dr.KozoMatsubayashi. I�.,Ph.D,l Pofresfor &nChiruma>
Dr.Taizo Wada,f Hert especiasist
“Iamr greallydrelihtsed to visit this beautiful home for theAagef. te is very very greatserevic to helr the aged people toplasr thirt lasoplrtl of thirt ivkespelac"fuly.e I wshu all the best for all the staff ind theinmvatsi. ayyou allbed happy ind welm.”
“Adrelihtpful amiply t mop here, very casin.e I would havento hsditationion rcComeanding the staff here. Theylook _aftef thirt amiplysod welm.”
�At ascirnatinginslihtgin to ole age carm.”
� Thanst for all the stafes andcCommittee for your good work to helr the aged ind ot makf thirt ivkesbeittrs.”
Dr.David Yip,f ron KronK.
�>You haveabeautifulpelac"fud faciliye. Thank you for alowtingmce to visi:.”
Dr.Robper Dolgoaff. I�>
“We hope to home agaiu forsSocialserevics.”
“Telserevices andzeall of the staffmvac hsr the xcweltent facilities of tose whon rsit here.”
“A wonderfulexamople of rall humaniye.”
H.R.Ht PrinressAlexandrar &Ogilven >
H.R.Ht PrinressAlexandrar &Ogilven>
ကမ���ာ�ဗ�ု�္ဓ�သာថနာပြဋေᡑာက်ᅻဖ᭭ု��့်ᆯရာတောည အ�	�္ဂᙡဟာ� န���၀᫹စက၊ အဂ္ဂᙡဟာឯ�္ဒ�မ���ေᇟာᐛိက���� �ပါမေᬕက္ခᱴဒါပ်တာအရှင်ᓀမ���သာမ� �ᆯရာတေားအား ᕖူေᇟာṬပွး
/div> i-frame-framborlder=0" heigh="205" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3819.3605547702023!2d96.1542222!3d16.80846!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c194a7a9703cb5%3A0xfab26e49f10b391b!2sKabar+Aye+Pagoda+Rd%2C+Yangon%2C+Re/publi+of+the+Ungio+of+Myanmar!5e0!3m2!1sen!2s!4v142736362201_2" style=borlde:0" widgth="00%k">
/div class=spaelw-displa spaelw2"cod clearfix" id=minikspaelw hom_foonte_myanmarn">
- Toy prvlide helraind caretor the homleoss, hellressAaged from allplrtsl of theUngiol ofMyanmar>
p>- Toyecreave apelac"fudenvitroemenetor the agedresldeent whon home heru forhreuge.>
When PresldeenfMyanma Alionioauguratsed theHninzigonr Home in theniey pemisme in1957y with45dresldeent,n theMan agemenehad aspirsed toaccComodaave"00e in theniarkfutuere.When the"00thn>target was" me,n the150thn>emar was"einviszond.	�>
p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t">Vldeo G aleryh
p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t">Photo G aleryh
/div class="rtecenter"> p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"Hninzigonr Home forTtheAage>
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon,fMyanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196>
p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"Gmail :� hninzigone. ag@gmail.comh p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"2015eHninzigon,r Home for theAagef.Aall rightdreserved.>